Xiddigta loo yaqaan 'ruby Star' micnaha - Lix xiddig oo la beddelay - ifafaale Asterism - Video
Ruby star dabiiciga ah iyo dhagaxyada safayr macnaha iyo qiimaha, dhaqan ahaan loo isticmaalo in dahabka sida siddo, hilqado, silsilado iyo suumanka. Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay midabka, hufnaanta, culeyska, iyo tayada xidiga.
Ka iibso ruby ​​star dabiiciga ah dukaankayaga
Qaar ka mid ah dhagaxyada loo yaqaan 'rubies Stone' ayaa muujinaya astaamo saddex geesood ah ama lix shucaac ah ama xiddig ah. Jaantusyadan ayaa loo jarjaray cabochons si ay u muujiyaan saameynta si sax ah. Asterism-ka ayaa ugu fiican oo lagu arki karo ilo hal-nuur ah. Oo ka gudub dhagaxa sida ileysku u socdo ama dhagaxu u rogayo. Saameyntani waxay dhacdaa marka iftiinka uu ka muuqdo xariirta. Taasi waxay sameysmeysaa qaab-dhismeedka muraayadda dhagaxa. Isku-darka cirbadaha qaabdhismeed ahaan u janjeedha, qaab gaar ah. Tani waa hal tusaale oo ka mid noqoshada ay kordhinayso qiimaha dhagax dhagax qaali ah. Intaa waxaa sii dheer, luuliyo ayaa muujin kara isbeddelada midabka in kastoo ay taasi dhacdo marar dhif ah. Sidoo kale sheekeysiga ama saameynta indhaha bisadda.
Ruby waa casaan ilaa dhagax casaan qaali ah. Noocyo kala duwan oo ah corundum macdanta (aluminium oksaydh). Noocyo kale oo midab qaali ah corundum waa safiirada. Ruby waa mid ka mid ah guntimaha dhaqanka ee caadiga ah. Wadajir ahaan ametustos, sidoo kale safayr, sumurud, iyo dheeman. Rubyaha eraygu wuxuu ka yimaadaa ruber, Laatiinka casaanka. Midabka jilicsanaanta waxaa sabab u ah maaddada chromium.
Tayada ruby ​​waxay kuxirantahay midabkeeda. Sidoo kale laga jaray, iyo caddeyn. Kee, oo ay weheliso culeyska carat, saameeya qiimaheeda. Hooska dhalaalaya uguna qiimaha badan ee casaanka ee loo yaqaan dhiigga-casaanka ama qoolleyda dhiigga, waxay amraysaa lacag xad dhaaf ah oo ka sarreysa noocyada kale ee tayada la mid ah. Midabku kadib wuxuu muujiyaa caddeyn: waxay la mid tahay dheeman. Dhagax cad ayaa amar ku bixin doona lacagta ganaaxa. Giraanta buluuga loo yaqaan 'ruby ring' oo aan lahayn irbado-eg oo kale ah ayaa calaamad u ah in dhagaha laga yaabo in loola dhaqmay ama Senttetik. Ruby waa dhalashada dhaqanka ee bisha July. Iyo inta badan waa casaan ka badan Garnet. Inkastoo qaar diyaargarowga dhuxusha waxay leeyihiin hunqaac la mid ah kuwa lafaha ugu badan.
Xiddigaha ama ifafaalaha astaamaha
Gashaddaha badanaa waxay doortaan inay gooyaan qaababka kabadhada, marka dhagxaanta ay tayadoodu hooseeyso. Gaabashooyinka iyo dhagaxyadaas marka ay iftiinku ka soo baxaan dusha cabochon iyo waxay ka dhigtaa raajo la mid ah. Saboolnimada waa xiddig ama sidoo kale asterism. Waxaa jira iyo xayaysiinta 6 sida caadiga ah loo arko. Tani waxay dhacdaa marka wacyigelinta irbadda sida galka ama silcka hoostiisa gudaheeda ay ku jiraan wax ka badan hal xagal.
Xabbad xidhan oo aan laga daaweyn Myanmar (Burma)
Xiddigga macnaha xiddigga iyo bogsiinta faa'iidooyinka guryaha
Xiddiga ruby ​​wuxuu leeyahay macno iyo sifooyin siinta milkiilaha hodan.
Waxaa loo maareeyay sida dahabka muddo dheer dad badan oo awood badanina way jeclaayeen. Tamarta qaaliga ah waa mid aad u xoog badan oo loogu yeero boqorka dahabka. Dadku waxay rumeysnaayeen inay ka adkaan karaan nooc kasta oo dhibaato ah. Waxaa loo sheegay in haddii Star ruby ​​uu si buuxda uga faa'iideysan karo awooddeeda, ay suuragal tahay inuu wax ka beddelo wax walba oo adduunka ka jira.
DeLong Star Ruby, oo ah 100.32 carat oval cabochon xiddig xiddig. Waxaa laga helay Myanmar sanadihii 1930-naadkii. Waxaa ka iibiyay Martin Ehrmann Edith Haggin DeLong lacag dhan US $ 21,400, ka dibna ugu deeqay Matxafka Mareykanka ee Taariikhda Dabiiciga ee Magaalada New York sanadkii 1937.
Bishii Oktoobar 29, 1964, DeLong star ruby ​​wuxuu ka mid ahaa dhowr dhagaxyo qaali ah oo laga xaday meel caan ku ah dahabka oo uu xaday Jack Roland Murphy iyo laba qof oo la socday. Bishii Janaayo 1965, sagaal ka mid ah gabdhihii la xaday, oo ay ku jiraan Xiddigtii Hindiya iyo Xiddigta Saqdii dhexe, ayaa laga soo saaray keyd bakhaarka basaska. Si kastaba ha noqotee, rubi DeLong kuma jirin iyaga. Kadib bilo gorgortan ah, cidda aan la garanayn ee haysata ruby ​​ayaa ogolaatay, iyada oo loo marayo dhinacyo saddexaad oo uu ku jiro Dick Pearson, in lagu sii daayo $ 25,000. Lacagta madax furashada waxaa bixiyay ganacsade reer Florida ah oo ganacsade ah John D. MacArthur wuxuuna goobjoog ahaa bishii Sebtember 2, 1965, markii rubiga laga soo helay goobta loogu talagalay in lagu rido: waab taleefoon oo ku yaal fagaaraha adeega ee Sunshine State Parkway oo u dhow Palm Beach, Florida. Bilo kadib Dick Pearson ayaa la qabtay isagoo jabsanaya dukaan dahabka lagu iibiyo oo ku yaal Georgia waxaana laga helay lacag dhan $ 100 biilal ah oo ay ku jiraan lambarro taxane ah oo u dhigma lacagta madax furashada. Waa la xukumay waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah ka dib markii uu ku lug lahaa kiiskii rubi ee DeLong Star.
Luuliyyada xiddigtu qiimo ma leeyihiin?
Xidigaha xidigtu waa luqadaha ugu dhifka yar. Waxay ka mid yihiin noocyada ugu qiimaha badan ee dhagxaanta midabada leh ee laga heli karo adduunka. Ruby xiddig ayaa dhif iyo naadir ah oo qiimaha ayaa ka qiimo badnaan kara dheemanta cabirka la barbardhigi karo.
Sidee loo sameeyaa rubi xiddigta?
Rubeydu waxay ka kooban yihiin corundum macdanta. Ruby waa qaab marka ay jiraan wax wasakh ah oo chromium ah oo ku jira corundum-ka. Chromium wuxuu sameeyaa midabka casaanka ee dhagaxa. Xiddiggu wuxuu raacaa qaabdhismeedka dhagxaanta ee dhagaxa, kaas oo ah laba-geesleyaal haddii aad u fiirsato sida loo jarjaray baaldiga barbar socda dhidibka weyn. Qaab dhismeedka laba geesoodka ah waxaa lagu sameeyay 3 jiho oo xarriiqyo is barbar socda ah. Marka dhagaxa loo jarjaro sidii kabooxan, saddexdaas sadarro isbarbar socda waxay sameynayaan 3 sadar oo muuqda ama 3 xiddigood oo ray ah. Iyada oo saameyn ku yeelaneysa muraayada oo ay abuurtay daahfurnaanta qubbada cabochon.
Ayaa xiran kara ruby ​​star?
Dadka hal-abuurka leh ee raadinaya magac iyo caan waa inay xirtaan dhagaxan. Isticmaalka dhagaxan waxaa si aad ah loogu talinayaa kuwa si joogto ah uga cabanaya caafimaad xumo. Dhagaxani wuxuu sidoo kale lagama maarmaan u yahay jilayaasha, dahablayaal, farshaxanleyda, saraakiisha dowladda, kuwa wax iibiya, kuwa ka ganacsada cudbiga iyo waxyaabaha cudbiga laga sameeyo.
Waa maxay midabka xiddigta midabka leh ee ugu qiimaha badan?
Midabku waa qodobka ugu muhiimsan ee saameeya qiimaha xiddigta ruby. Ruby-ka ugufiican wuxuu leeyahay casaan saafi ah, firfircoon oo waxyar nadiifiya midab casaan ah. Suuqyada badankood, midabada casaanka ah ee saafiga ah ayaa amraya qiimaha ugu sareeya iyo ruby ​​leh dusha sare ee liinta iyo guduudka ayaa ka qiimo yar.
Ka iibso ruby ​​xiddig dabiici ah dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan ka sameysannaa dahab la qurxiyay oo dabiici ah oo leh xiddig dabiici ah iyo dhagaxyo safayr ah siddo, hilqado, silsilado, suumanka… Fadlan nala soo xiriir xigasho.